Andiany 460SLM Swinging Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Ny dredge 460SLM Swinging Dragon® dia mety amin'ny tetik'asa momba ny tontolo iainana sy tery ary ny farihy ary ny fitrandrahana farihy. Ity singa ity dia manolotra fahaiza-manao miavaka miaraka amin'ny fahaizana miasa na dredge tohatra mihetsiketsika hiasa amin'ny fantsona tery na toy ny dredge mahazatra rehefa ilaina ny sakany malalaka kokoa. Amin'ny alàlan'ny maodely tohatra, ny mpandraharaha dia afaka mametraka ny cutterhead ho an'ny fanapahana marina sy ny fahombiazan'ny famokarana tsara indrindra.
460SLM DREDGE tombony
Ny maody tohatra miketrika dia ahafahana mampiasa amin'ny fantsona tery ary manala ny filana tariby sy vatofantsika.
Mivory mora foana amin'ny fampiasana fitaovana mahazatra sy vano an-dranomasina.
Ny sambo mitaingina sambo ao anaty sambo dia mampandroso haingana ny trondro sy ny marina azy.
Haben'ny famoahana: 12 ″ x 12 ″ (300 mm x 300 mm)
Ny halalin'ny dredging farany ambany: 20 ′ (6 m)
Crane fikirakirana paompy.
Andry sy famantarana famantarana.
Stern jib crane ho an'ny fantsom-panafahana.
Hever amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy aircon.
Misy safidy fanampiny azo alaina amin'ny fangatahana.